ktmkhabar.com - यौन दुर्बलता छ ? छ भने ग्यारेन्टी समाधान हुने घरेलु खानेकुरा आजैबाट खानुहोस्…
यौन दुर्बलता छ ? छ भने ग्यारेन्टी समाधान हुने घरेलु खानेकुरा आजैबाट खानुहोस्…
यौन इच्छामा कमी हुनुलाई नै यौन दुर्वलता भनिन्छ । यसको लक्षण मानसिक तथा शारीरिक दुबै रुपमा देख्न सकिन्छ । यौन इच्छामा कमी हुनु, यौन सम्पर्कमा रुची नहुनु जस्ता कुराले मानसिक रुपमा यौन दुर्वलताको संकेत गर्दछ । यौन इच्छा वा सम्पर्कका बेला लिंगमा कडापन नआउनु, मोटो वा ठूलो नहुनु शारीरिक रुपमा देखिने यौन दुर्वलताको संकेत हो । यो या त्यो जुनसुकै कारणले पनि महिला या पुरूष दुबैमा यौनको भोक नलाग्नु वा यौनको प्यास मेटन नसक्नु यौन दुर्वलता हो ।
यौन दुर्वलता गम्भीर विषय भएपनि यो प्राय गोप्य राखिन्छ । नेपाली संस्कारमा यौन र यौनसमस्यालाई संकुचित रुपमा हेर्ने गरिन्छ । सारिरिक सम्पर्कका बेला यौन उत्तेजना नभएको भन्दै धेरै दम्पतिमा खटपट हुने गरेको छ । यस्तो समस्याको समाधान अब घरेलु तरिकाबाट नै हुन्छ । यौन उत्तेजना बढाउन बिभिन्न खानेकुराहरुको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
प्राचीनकालदेखि नै यौन उत्तेजकको रुपमा लिईने लसुन सधै खाने गर्नुहोस् । अरुसँग बोल्दा दुर्गन्ध आउने भन्दै धेरै लसुन खान डरााउँछन् । तर लसुनमा एलिसिन नाम गरेको तत्व हुन्छ यसले रक्त प्रबाहलाई सुर्धाछ, अत्याधिक सचेत बनाउछ । स्टेमिना बढाउँछ र एक प्रकारको ऊर्जा प्रदान गर्छ । कालो लुसनमा यो गुण अझै बढी हुन्छ ।
खरभुजा यति उपयोगी हुन्छ भन्दा तपाइँलाई अचम्म लाग्ला । तर यसले भियाग्राले भन्दा कम प्रभावकारी काम गर्दैन । खरभुजामा सिट्रयूलाइन नामक तत्व हुन्छ जसले शरीरमा रक्तसञ्चार बढाउँछ र कामेच्छा पनि वृद्धी गर्छ ।
शरीरमा सेक्स हर्मोन कायम राख्नका लागि केरा निक्कै उपयोगी मानिन्छ । यसले शरीरमा स्ट्रेस घटाउन र हर्मोन बढाउन अहम भूमिका खेल्न चिकित्सकहरु बताउँछन् । त्यसै गरी केरा सेवन गर्दा यसमा हुने ब्रोमेलाइन नामक इन्जाइमले पुरुषमा कामेच्छा बढाउने बताइन्छ ।
घरेलु खानेकुरायौन दुर्वलता